Ndifuna ukwazi ukuba uyisebenzisa njani i-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 372
ukuba abasebenzisi abatsha Kwiintanethi zentlalo, ngamanye amaxesha kunzima ukuqonda amandla eenethiwekhi ngokwawo, oko kukuthi, sinezinto ezininzi esinokukhetha kunye neenzuzo abasinika zona, kodwa asiziqondi ngokupheleleyo. Kwaye ngalo lonke ixesha umntu esichazela into ebonakalayo ngokucacileyo kukuhlushwa.
I-Instagram ayibaleki le nyanisoNangona yenye yezona zilula namhlanje, iintlobo ngeentlobo zezibonelelo zazo zinokuthetha into enzima ebantwini. Sukuba nexhala, nantsi siza kuchaza eminye yemisebenzi esisiseko yesi sicelo, siyathemba ukuba ulwazi luya kuba luncedo kuwe.
Isicelo esenzelwe kuqala isetyenziswe kuphela kwiifowuni eziphathwayo.
Ukusetyenziswa kwayo okuphambili yayikukuvumela Abasebenzisi bayo ukufaka iifoto kunye neevidiyo zemizuzwana embalwa apho banokubonisa khona iziqwenga zobomi babo bemihla ngemihla ezinokubangela uhlobo oluthile lweemvakalelo.
Yinethiwekhi yokuncokola, njengoko besesitshilo, yenzelwe ikakhulu ushicilelo lwendalo ebonakalayo.
Kubasebenzisi abaninzi oku kunjalo inethiwekhi yoluntu kakhulu apho banokwazisa khona abalandeli babo kunye nabahlobo amaxesha abonisa usuku lwabo suku ngalunye.
Inani elikhulu lokucoca kunye nezixhobo Ukwenza iifoto kunye neevidiyo esizilayishayo zinomtsalane ngakumbi, ziyavela kupapasho ngalunye esilwenzayo kwaye inkqubo efanayo iya kukunika uthotho lwemiyalelo elula ukuze uzisebenzise. Ezi zihluzo ziya kukuvumela ukuba uguqule kwaye uphinde uphinde uphinde upapashe.
Amabali e-Instagram, Ezi ziividiyo ezincinci kunye neqela leefoto apho abasebenzisi babelana khona ngendlela egqibeleleyo, ngamanye amazwi, loo maxesha obomi babo abenza ukuba bangalibaleki, nokuba injani na imeko yabo, kwakhona le nkqubo iya kukuxelela indlela yokwenza la mabali ngokulula kwaye ngokukrakra.
Imiyalezo ngqo lolunye uncedo olunikezelwa sesi sicelo, ngokungathandabuzekiyo sesinye sezibonelelo ezenze ukuba ibe nomtsalane ngakumbi ebantwini, kuba lo ngumsebenzi obusilela kule app. Oku kusivumela ukuba sabelane ngasese kwezinye iimpapasho zabalandeli bethu okanye izihlobo zethu nabanye abahlobo ngokuthumela imiyalezo ngqo.
Sinokuthumela imiyalezo, nokuba ngumntu omnye okanye neqela elincinci labalandeli bethu okanye abahlobo, thumela kwaye ufumane imiyalezo kwangoko, ukuze sikwazi ukuncokola.
Iimvakalelo kunye nokuphendula ngokuthe ngqo yomyalezo othile lolunye lwezongezo kule nkonzo kwaye, enye indlela yokuncamathisela iifayile ngokuthe ngqo kwigalari okanye kwimemori yangaphakathi yeselfowuni ayinakuphoswa. Le yenye yeendaba zamva nje zesicelo.
Olunye ulongezo lwamva nje kwinkonzo yemiyalezo ziinowuthsiNangona zingekho zide kakhulu, ziluncedo kwabo bangakuthandiyo ukubhala imiyalezo emide.
1 I-Instagram yile:
Ungawukhuphela njani umculo kwiYouTube ngaphandle kweenkqubo?